Tababarkan waxaa loogu talagalay dhageystayaasha doonaya inay bartaan aqoonta aasaasiga ah ee xukuma waxqabadka bulshada ee ay fuliyaan maamulada maxalliga ah.
Faham sida ficilka bulsheed uu u dhashay una kobcay; sida maamul-daadejintu ay gebi ahaanba dib ugu habsatay qaybtan; sida 2000-meeyadii, sharciyada ugu waaweyn ee la xiriira qaybaha kala duwan ee waxqabadka bulshada ay la socdaan isbeddellada waaweyn ee bulshada, sida gabowga dadweynaha, baaxadda iyo kala duwanaanshaha dhibaatooyinka shaqada, isbeddelka qaybta qoyska, muuqaalka muuqaalka Xaaladda degdegga ah ee bulshada, wax ka beddelka iyadoo la tixgelinayo mas'uuliyiinta dadweynaha ee goobta dadka.
Sida qalalaasihii sharci-dejinta ee ugu waaweynaa shantii sano ee la soo dhaafay (Sharciga MAPTAM, Sharciga Notre) ay gilgileen aagagga soo jireenka ah ee kartida maamulada maxalliga ah; sida ugu dambeyntii, isbeddelada ugu weyn ee shaqada maanta (caalami, dijitaal, tamarta, kala-guurka deegaanka, iwm.) waxay nagu martiqaadayaan inaan ka fekerno isbeddelka ficillada bulshada: kuwani waa caqabadaha seminar online-ka ah.
Waxa kale oo ay isku dayi doontaa in la qeexo hababka waaweyn ee ka shaqeeya siyaasadahan dadweynaha, iyo sidoo kale doorka jilayaasha.
Aasaaska waxqabadka bulshada Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Sigaarka jebinta: tilmaamaha isticmaalka
horeKa shaqaynta deegaanka ee caafimaadka iyo fayo-qabka dadka
socdasauvTage: barashada si loo badbaadiyo nolosha da 'kasta
Bilaash: Sida Loogu Isticmaalo Waxqabadyada Qaabeynta Xaaladda
COVID-19 iyo daryeelka muhiimka ah
Waxaa soo booqatay Elisabeth Borne ilaa Côte d'Or
Ka shaqee Faransiiska A2-B1